Axmed Madoobe oo xilalkii ka qaaday taliyeyaasha Booliska iyo Nabadsugidda Jubbaland - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Axmed Madoobe oo xilalkii ka qaaday taliyeyaasha Booliska iyo Nabadsugidda Jubbaland - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Axmed Madoobe oo xilalkii ka qaaday taliyeyaasha Booliska iyo Nabadsugidda Jubbaland
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo saaray wareegto uu xilalkii uga qaaday taliyeyaasha ciidamada Booliska iyo Nabadsugidda maamulkaasi, kuna magacaabay taliyeyaal cusub.
Wareegto kasoo baxday Madaxweynaha Jubbaland ayaa taliyaha Booliska Jubbaland loogu magacaabay Gen. Maxamed Cabdi Sheekh, halka Taliye ku xigeenka Booliska isna loo magacaabay Jen. Maxamed Guuleed Xasan.
Waxaa kaloo wareegtada lagu magacaabay Agaasimaha Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda oo loo magacaabay Maxamed Axmed Sabriye.
Previous articleWakiilada Beesha Caalamka oo shir degdega ugu yeeray Farmaajo iyo Shir ka socda xarunta Afisyoone
Next articleXaafado ka mida Muqdisho oo ka baxay Gacanta Ciidamada taageersan Farmaajo iyo Xaaladaha ka dhalan kara..